Gabon: Njengokuba tailor omnye girls kwamnceda INKWENKWEZI
sisebenzisa pleased malunga inzala yakho kwi-inkwenkwezi. Ngelishwa, yakho Zincwadi indala zethu site. Nceda sebenzisa senziwe ngoguqulelo Lomsebenzi omtsha we-Intanethi Forte okanye enye i-Zincwadi ezifana i-Firefox okanye ye-chrome.
Overwhelmed yi-intlupheko jikelele kuye, waqalisa Indian tailors ukunceda Kuka Arora. Ezincinane kuqala, kwaye ke nayo yonke into kokuba. Kuka Arora kunye nabantwana ukususela yena waseka ‘i-sunshine Projekthi’, street abantwana kwi-metropolis ka-Delhi yenza esikolweni ndwendwela. Igumbi apho cutter Kuka Arora iyakwamkela yayo abathengi, ayina window. Nabani na iza apha, intliziyo metropolis ka-Delhi, kuba fitting, kufuneka kuqala, yi kakhulu spacious dining igumbi. E-emini emaqanda uyakwazi kuva ukusuka apho, oqaqambileyo amazwi abo. ‘Ah, abantwana kuza ekhaya ukusuka esikolweni,’ utshilo Arora. Kuka Arora ubomi ubomi a lohlobo Indian eliphakathi-iklasi njengoko mna-uqeshiwe. Umfazi wakhe, Parity isixeko isikhokelo. Uyahamba ngomgca abahlobo kwi-gym. Usapho izakuba financially iselwa koko – ukuba bekungekuko abantwana.
Zalisa lonke dining igumbi
Ngexesha ukuvula ucango ukuba staircase ngakumbi ukuphunyezwa currents: Ukuba abantwana Umnu abaququzeleli ngabo, Arora furnished kuba kophahla. Apha, kakhulu, uluhlu lophinda-phindo ingaba ngoku phinda-phinda kwaye triple uxakekile. Aroras tailoring sele nje ezimbalwa abasebenzi. Oko ifumaneka omnye simpler indawo Delhi. Slums kwaye eliphakathi-iklasi Apartments, ingaba ngokusondeleleneyo intertwined. Kwi-phambili ngayo angaqhelekanga njenge encinane exhaust imoto, backyard, ukuba lusizi. Nceda thumela: IBAN DE BIC DEUTDEHH igama elingundoqo ‘i-sunshine Projekthi’. Isiseko inkwenkwezi kuyo yonke waqala ngonyaka. Kukho abancinane kubekho inkqubela bawa Arora, sesandla waba ilahlekile. I-small Rosini waba mhlawumbi emibini ubudala, abe qikelelo. Kwi-begging kwi-phambili a cinema i-neighborhood. Yena nomfazi wakhe baqalisa ukuzisa yithi rhoqo into kudla. Ukuze ukwazi Kuka Arora kunye nomkakhe, Parity: ngakumbi street abantwana, sele furnished i-ezimbalwa kunye kophahla indlu yakhe, Kodwa ngenye imini wayengomnye bemkile. Kuka, Parity, kwaye sifumaneke nguwe olandelayo ukuba uxakekile main road, babethe wathumela kukho ngenxa yokuba kwakungekho ngakumbi beg. I-Aroras wenza Yaba kunye bengenamakhaya abazali: kokuba ihlawulwe Rosini imfundo, ulondolozo lwempilo kwaye ukutya. Abazali vumelani sihamba esikolweni. ‘Emva kwiintsuku ezimbalwa, ukubonelelwa street abantwana, abo evile Rosini weza,’ utshilo Arora. ‘Kwaye kwakukho rhoqo ngakumbi. Abantwana beze end zakhe zemali izixhobo zokusebenza, kodwa Aroras made. Uncedo weza ngokusebenzisa isijamani uhambo attendant Ujulia Hillebrecht, landed i-seed engenamkhethe kwi-Aroras tailoring. Ukususela ngoko, yena ke ukuqokelela iminikelo kuba yakhe ‘i-sunshine Projekthi’ kwaye arranges inkxasomali. Kukho sele ‘I-sunshine’-abantwana ukusebenza njengoko ootitshala, Doctors okanye lwabalawuli – uncedo Isizukulwana esilandelayo abantwana. Kuka Arora ufuna ukuqhubeka: ‘Thina? ukufumana abantwana kwi street, andazi njani ubudala ingaba wena okanye ingaba ungumnini zinokuphathwa’, athi. ‘Ndifuna ukuqondisisa ukuba kuba ndonwabe lwabantwana abancinane. Kanjalo kule ndawo, Cookies zisetyenziswa. Sinako ukuhlola site ukusetyenziswa ukusebenzisa editorial isiqulatho kunye izibhengezo esekelwe imboniselo. Kubalulekile kuthi, ngenxa yethu kunikela ngu financed ngokusebenzisa izibhengezo. Ukusetyenziswa kule ndawo, ufuna imvume kwi-Cookie ukusetyenziswa. Ngaphezulu ulwazi kwaye iinketho
← Zinokuphathwa Indian ividiyo incoko. Ividiyo Dating simahla - Kuhlangana Indians-Intanethi
Njani unako ndiya kuhlangana abafazi ukusuka e-India. Indian Dating →